एसईओ मार्केटरहरूको कन्फेशन Martech Zone
एसईओ मार्केटरहरूको कन्फेक्शन
बुधवार, अगस्त 13, 2014 शुक्रबार, अगस्त 26, 2016 Kieran विल्सन
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन मार्केटिंग अनुकूलनको एक टुक्रा हो, र यो न्यूयोर्क शहरमा पार्कि sign साइन जत्तिकै भ्रमपूर्ण र सहयोगी हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू SEO बारेमा कुरा गरिरहेका र लेख्ने छन् र धेरैले एक अर्काको विरोधाभास गर्छन्। म Moz समुदायमा शीर्ष योगदानकर्ताहरूसम्म पुगें र तिनीहरूलाई उही तीन प्रश्नहरू सोधेंः
के SEO रणनीति सबैलाई मन पराउछ वास्तवमा बेकम्मा?
कस्तो विवादास्पद एसईओ युक्ति तपाईलाई मूल्यवान छ जस्तो लाग्छ?
हाल, सबैभन्दा ठूलो एसईओ मिथक के हो?
बिभिन्न विषयवस्तुहरू स्पष्ट छन् र विज्ञहरूका बीच केही विरोधाभास छ, त्यसैले म तपाईंलाई आफ्नै निष्कर्ष निकाल्न दिनेछु, जुन मलाई आशा छ कि तपाईं तल टिप्पणी सेक्सनमा साझा गर्नुहुनेछ।
मलाई लाग्छ कि एसईओ विश्व वास्तवमै ढिलोको परिष्कृत भएको छ। त्यहाँ धेरै धेरै रणनीतिहरू क्षेत्रको विस्तृत श्रृंखला द्वारा अँगालेको छ जुन वास्तवमै बेकार छ। त्योले भन्यो, मलाई लाग्छ कि एउटा व्यापक युक्ति जुन मर्नुपर्‍यो कि अव्यवसायिक, चिसो आउटरीच हो अतिथि ब्लगिङ। यी अनुरोधहरूको विशाल बहुमत खराब गरीएको छ र मलाई शंका छ कि जब उनीहरूले प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछन्, यो प्रायः त्यस्तै साइटहरूबाट हुन्छ जहाँ तपाईं पाहुना पोष्टिंग हुन चाहनुहुन्न। रान्ड फिशकिन, मोज
लिङ्क इमारत। लि always्क निर्माण रणनीतिमा अधिक समय खर्च गर्नको लागि यो सधैं मूर्खतापूर्ण छ, त्यसोभए प्रथम स्थानमा सामग्री सिर्जना गर्न। मैले सँधै भनेको छु कि यो पहाड माथि राउन्ड बोल्डर तान्नु जस्तै हो। प्रयासको साथ, यो पहाडमा चढ्नेछ, तर गुरुत्वाकर्षणले सँधै यसलाई फिर्ता राख्छ जहाँ यो सम्बन्धित छ। तपाईंको पृष्ठ उही विषयको बारेमा वेबमा कुनै पनि पृष्ठ भन्दा राम्रो बनाउनुहोस्, वा यसलाई प्रकाशित नगर्नुहोस्। सधैं काम गर्दछ। कुनै पोष्ट-सामग्री सिर्जना प्रयास आवश्यक छैन। प्याट्रिक सेक्स्टन, बोट फिड
त्यहाँ धेरै थोरै चीजहरू छन् जुन पूर्ण रूपमा बेकम्मा छन्; सबै कुराको एक ठाउँ हुन्छ। त्यसो हो भने, तपाईंको साइट ए मा थप्दै विशाल निर्देशिका भनिन्छ PR6links4U.biz अब बेकारको बाहिर खतरनाक क्षेत्रमा सरेको छ। म मानिसहरूलाई सहजै उनीहरूको साइटहरू कुनै पनि डाइरेक्टरीमा थप्नको लागि सल्लाह दिईन्छ जसले कसैलाई कुनै पनि मध्यस्थता बिना आफ्नै जानकारी थप्न दिन्छ। फिल बकले, कुरागामी
अतिथि ब्लगिङ। म यसलाई अहिले बार्ज पोल मार्फत छुने छैन, तर केवल लिंक निर्माणको सवालमा। यसका अझै पनि फाईदा छन्, तर व्यक्तिहरूले मानसिकताबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ कि यो लिंकहरू लिने तरिका अब छैन। एंडी पेयजल, आईक्यू एसईओ
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि सामग्री मार्केटिंग एक बेकार रणनीति हो - जब यसको आफ्नै प्रयोगमा हुन्छ (हे हेराई, एक पुलिस-जवाफ)। म धेरै व्यक्तिहरु लाई "निर्माण गर्नुहोस् र उनीहरु आउनेछन्" सामग्रीमा दृष्टिकोण अपनाएको देख्दछन्, जहाँ उनीहरूले सामग्रीलाई बाहिर राख्छन् र त्यसपछि लिंक, साझेदारी र परिणामहरूको अपेक्षा गर्दै उनीहरूको गधामा बस्दछन्। यो जस्तो काम गर्दैन। तपाइँ कसरी तपाइँ तपाइँको सामग्री को बजार र आदर्श रूप मा सक्रिय हुन आवश्यक छ, तपाइँ सामग्री लाई उत्पादन गर्नु अघि, तपाइँले सम्भावित सामग्री विचारहरु मात्र होइन, तर सम्भावित प्रकाशन अवसरहरू खोज्न अनुसन्धान गर्नु पर्छ। हालसालैका वर्षहरूमा मैले देखेका सब भन्दा उत्तम सामग्री मार्केटि posts पोष्टहरू मध्ये एक कस्टमर देव ल्याब्स गुगल न्यूज ह्याक गर्नका लागि मार्गनिर्देशन हो, जसले तपाईंलाई लेखकहरू खोज्नमा उत्कृष्ट गाईड प्रदान गर्दै थियो जसले तपाईंको विगतमा तपाईंको विशेष विषयलाई ढाकेका थिए र फेरि त्यसो गर्न चाहन्छन्। यदि तपाइँ सामग्री अनुसन्धानलाई उचित अनुसन्धानको साथ जोड्नुहुन्छ भने, यो बेकारबाट अनमोलमा जान सक्छ। टम रोबर्ट्स
मँ भन्न सक्छु मेटा कीवर्ड एक सानो बेकारको हुन सक्छ। केही वेबमास्टरहरू अझै यो फिल्ड स्प्याम गर्न मन पराउँछन्। बिंग को लागी तिनीहरू Google को लागी मान उत्पादन गर्न सक्दछु मँ धेरै सीमित मान भन्न चाहान्छु। जेम्स नोर्क्वे, समृद्धि मिडिया
धेरै मानिसहरु मा उफ्रिन्छन् पछिल्लो SEO युक्ति, जेसुकै भए पनि यो किन हो किनकि यो प्राय जसो बारेमा कुरा गरिरहेको छ, तर साईट र ब्रान्डको सन्दर्भमा वास्तवमै यसको बारेमा सोचे बिना तिनीहरू काम गरिरहेका छन्। डिजिटल PR अरू भन्दा धेरै को लागी उपयोगी हुन सक्छ, उदाहरण को लागी। मेरो सल्लाह सँधै सबै सम्भावित रणनीतिहरू सुरुमा हेर्नुहोस् र त्यसपछि त्यस विशेष ठाउँमा लगानीमा सम्भावित प्रतिफलको आधारमा खाली whittle डाउन गर्नुहोस्। साइमन पेनसन, Zazzle
म त्यो भन्न चाहन्न rel = लेखकत्व बेकारको छ, यस्तो लाग्दछ कि यो भविष्यमा ठूलो मूल्यवान् हुनेछ, तर मलाई लाग्छ कि यो क्षणमा यो प्रमुख कारक होइन। फाउंडेशन निर्माण गर्ने समय आइसकेको छ, अहिलेसम्म परिणामहरू हेर्ने समय आएको छैन। ड्यानी डोवर, Lifelisted.com
धेरै एसईओहरू चीजहरू बेवास्ता गर्दछन् जसले तिनीहरूलाई एक नफोलो लिंक दिन्छ, तर म विश्वास गर्दछु त्यहाँ ठूलो मूल्य छ नफोलो लिंकहरू त्यो योग्य ट्राफिक पठाउन सक्छ। रान्ड फिशकिन, मोज
म पक्का छैन विवादास्पद यो वर्णन गर्न सही विशेषण हो तर अतिथि पोस्टिंग पक्कै पनि यो एक क्षेत्र हो जुन यसको अनुहारमा Google र अन्य द्वारा हालसालै ल्म्ब्स्ट गरिएको छ। वास्तविकतामा, मुद्दा पाहुना पोष्टिंगको साथ होइन, जुन मेरो लागि प्रासंगिक साइटहरूसँग उत्कृष्ट सामग्री सिर्जना गर्ने र साझेदारी गर्ने कला हो, बरु "स्प्याम्मी" रणनीतिहरू जुन समान मोनिकरको साथ लेबल गरिएको छ। यो सँधै यस्तो भएको छ कि सस्तो, अपठनीय सामग्री सिर्जना गर्न र एक लि quality्कको साथ यो राख्नको लागि खराब गुणको साइट भुक्तान गर्नु खराब अभ्यास हो र रोक्नुपर्दछ, तर त्यो पाहुना पोस्टि not होइन, त्यो स्पाम हो। साइमन पेनसन, Zazzle
अतिथि ब्लगिङ। कुनै श doubt्का बिना, एक ब्रान्ड निर्माण परिप्रेक्षबाट र एक नयाँ दर्शक परिप्रेक्ष्यमा यसभन्दा राम्रो अरू केही छैन। यदि तपाईंले यो गरिरहनु भएको कारण लिंकको लागि मात्र हो भने, चिन्ता नगर्नुहोस्, तर यदि तपाईंको लक्ष्य पाठकहरूलाई शिक्षित र खुशी पार्नु हो भने तपाईंले सकारात्मक व्यवसायको परिणाम देख्नुहुनेछ। फिल बकले, कुरागामी
यहाँ धेरै छन्, त्यसैले म एउटा छनौट गर्दैछु कि मान्छे दुबै छेउमा बसिरहेका छन् - र केहि यसमा! पृष्ठ रैंक Sculpting ती क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जुन तकनीकी एसईओ संसारमा उनीहरूको बीचमा मिश्रित भावनाहरू छन्। यद्यपि यो सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गर्नुपर्नेछ किनकि गुगल मुद्दाहरु आउँदा तपाई मुद्दाहरूको अन्त्य गर्न चाहनुहुन्न। यसलाई सहि गर्नुहोस्, र त्यहाँ पक्कै पनि लाभहरू छन्। एंडी पेयजल, आईक्यू एसईओ
मैले भन्नु पर्छ अतिथि पोस्टिंग, यो तपाईंको ब्राण्ड र प्रस्ताव प्राप्त गर्ने सबैभन्दा मूल्यवान तरिका मध्ये एक ठूलो वा अन्य दर्शकहरूको अगाडि तपाईंको पहिले नै छ। जब म प्रकाशकको ​​लागि काम गर्दछु म अक्सर डरलाग्दो अतिथि पोष्ट गर्ने विचारहरू र / वा पिचहरू लिन्छु। तपाईंले जहिले पनि तपाईंको 'A' खेल ल्याउनुपर्दछ, वा कम्तिमा प्रयास गर्नुहोस्। मार्टिजन स्किजेबेलर, नेक्स्ट वेब
सत्य, ती सबै रणनीतिहरू को रूपमा लेबल हुन्छन् कालो टोपी, यदि टोपी तपाईंको चीज हो भने, यसको केही डिग्री मूल्य हुन्छ। बिल्कुल अवैध अवैध (जुमला प्लगइन शोषणकर्ताहरू, म तपाईलाई हेर्दै छु) को अपवादको साथ, तपाईले ती सबै कार्यनीतिहरूको मूल्य देख्न सक्नुहुनेछ - र ब्लग नेटवर्कहरू, लिंक भाडा, पुनर्निर्देशनहरू वा राम्रो पुरानो फ्यासन स्प्याम । किन कोही SEO हरू अझै यी रणनीतिहरू प्रयोग गर्छन् किन कि तिनीहरू अझै काम गर्छन्। तिनीहरूले अझै पनि राजस्व उत्पन्न गरिरहेका छन्। निश्चित, साइटहरु अन्ततः दण्डित हुनेछ तर यदि तपाइँ तपाइँको बजेट र लगानी मा तपाइँको फिर्ता काम, तपाइँ अझै पनि एक लाभ बनाउन सक्नुहुन्छ।
अब, यदि तपाइँ एक ब्रान्ड निर्माण गर्ने र त्यो वेबसाइट प्रमोट गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ र यस्तै रणनीति प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँलाई गोली हान्न सकिन्छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ एसईओ विधिहरू प्रयोग गरेर तपाइँको ब्राण्डको अनलाइन उपस्थितिलाई जोखिममा पार्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई दण्डित र डिइन्डडेक्स भएको देख्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ एसईओ खेलबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कनु पर्छ। तपाईं मुर्ख हुनुहुन्छ, तपाईं कुरूप हुनुहुन्छ र तपाईंको कुनै साथी छैन। यसको सट्टामा, परीक्षणलाई अलग गर्नुहोस् र यसलाई पूर्ण रूपमा छुट्टै साइटमा बाहिर लैजानुहोस् र सायद पूर्ण रूपमा भिन्न कुञ्जी शब्द समूहमा। केही विधिहरू परीक्षणमा राख्नुहोस्। लागत, रैंकिंग, यातायात र सीसा मापन गर्नुहोस्। कति पैसा तपाईंले लगानी गर्नुभयो? कति समय? के यो लायक थियो?
यसलाई आर एन्ड डिपार्टमेन्टको जस्तै सोच्नुहोस् - मार्केटरहरूको रूपमा, हामी हाम्रो कम्पनीको everyणी हुन्छौं जसले राजस्व उत्पन्न गर्न सक्ने हरेक सम्भावित मार्ग पत्ता लगाउँदछ। यो यस्तो हुन सक्छ कि यी केहि अन्य विधिहरूले त्यसो गर्न सक्दछन्। वा तिनीहरू आर्थिक रूपमा व्यावहारिक नहुन सक्छन्। वा तिनीहरू पूर्ण रूपमा असफल हुन सक्छ। पोइन्ट भनेको तपाइँको लागि के काम गर्दछ हेर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस्। लेबल र पूर्व धारणा हटाउनुहोस् र डाटा मा जानुहोस्। टम रोबर्ट्स
जबकि यो केवल कुराकानीको रूपमा विवादास्पद हो, म अझै विश्वास गर्दछु सहि मेल खाताहरू (EMD को) र आंशिक मिलान डोमेनहरूको SEO मूल्य छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाई EMD भएको कसैको अगाडि रैंक गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईंसँग छैन भने। यसको मतलब त्यहाँ त्यहाँ केही मूल्य छ यदि तपाईं EMD वा PMD प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। रोबर्ट फिशर, राष्ट्रपति, ड्रमबिएट मार्केटिंग
म शायद वेबमास्टर्स भवन भन्न सक्छु ड्रप डोमेनहरू र उनीहरूलाई सम्बद्ध साइटहरूमा परिणत गर्दै, यो एक रणनीति हो जुन अझै कार्य गर्दछ, यदि लिंक प्रोफाइल सफा छ। यद्यपि जब वेबमास्टरहरूले यसलाई ठूलो डिग्रीमा मापन गर्छन् गुगलले यसलाई मेटाउन सक्छ र तपाईंले यो घटना समय र समय फेरि देख्नुहुनेछ। अझै, तपाईं सम्बद्धहरूका लागि महसुस गर्नुहुन्छ जो केवल केहि पैसा बनाउन चाहानुहुन्छ। जेम्स नोर्क्वे, परामर्श निर्देशक, समृद्धि मिडिया
यो जस्तो देखिन्छ ऐडवर्ड्स खर्च जैविक मा वास्तव मा एक प्रभाव छ। मलाई लाग्दैन कि यो सीधा सँगै बाँधिएको छ तर यो मेरो डाटासेटबाट स्पष्ट छ कि यो सहवास गरिएको छ। यो एक बर्ष पहिले भन्दा फरक छ जब सहसंबंध अस्पष्ट थियो। Google ले सामाजिक मिडिया जियान्टबाट अधिक र अधिक दबाब महसुस गर्न थाल्दा, यो उनीहरूले आन्तरिक डिपार्टमेन्ट भित्ताहरू सम्बन्धी आफ्नै नीतिहरू खोल्न सक्ने बनाउँदछन्। ड्यानी डोवर, Lifelisted.com
त्यहाँ पौराणिक कथा को धेरै छ कि निर्माण राम्रो, अद्वितीय सामग्री स्तर प्राप्त गर्न पर्याप्त राम्रो हुनुपर्छ। त्यो लामो समयको लागि केस भएको छैन, र क्रल गर्न र अनुक्रमणिका गर्न पर्याप्त राम्रोको मतलब रैंक गर्न पर्याप्त राम्रो छैन। यदि तपाईं शीर्ष १० मा उत्तम नतिजा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्न भने, गुगलले तपाईंलाई दर्जा किन दिनुपर्दछ? रान्ड फिशकिन, मोज
त्यो पाहुना पोष्टिंगको मृत्यु भएको छ! र साथै कि SEO बाहिर जाँदै छ। जैविक खोजी मार्फत मूल्यको दर्शकहरूको निर्माण कुनै पनि समयमा चाँडै टाढा जाँदैन र यदि त्यो एसईओले गर्छ भने त्यो यहाँ रहनको लागि हो। जित्नको लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिहरूले अब अन्य विषयहरू समावेश गर्न सक्दछ तर टेक्निकल पीस अझै पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ जति नै च्यानलबाट आरओआई अधिकतम बनाउनको लागि। साइमन पेनसन, Zazzle
मेरो दिमागमा सब भन्दा ठूलो एसईओ मिथक त्यो हो SEO डिजाइन भन्दा बढी प्रभावकारी छ र उपयोगिता। एसईओ एक साइट को काम गर्दछ के एक सानो भाग हो, एक ठूलो भाग होईन। प्याट्रिक सेक्स्टन, बोट फिड
जब कसैले 'SEO मेरो साइट' भन्छ कि वास्तवमा अनुवाद हुन्छ के हो, मलाई वेबमा कसरी प्रासंगिक हुने र मद्दत चाहिने उपाय छैन। SEO होईन स्ट्यान्ड-एक्लो पछाडि अब कुनै। यदि तपाईंसँग SEO को व्यक्ति एक साइडमा एक साइडमा छ भने, तपाईंको डिजिटल उपस्थितिको प्रत्येक अन्य पक्षलाई कष्ट दिइनेछ। एसईओको भेन चित्र अब लेखक, ग्राफिक्स, जनसंपर्क, भिडियो र अनुसन्धान र ओभरल्यापसँग मिल्छ। फिल बकले, कुरागामी
किवर्ड मेटा ट्यागको प्रयोग फाइदाजनक छ वा कीवर्ड घनत्व। यी मध्ये कुनै एकबाट आफ्नो छान्नुहोस्। कीवर्ड मेटा ट्यागहरूको फाइदा केही वर्ष अघि गुगलबाट हटाइएको थियो, यद्यपि कसै-कसैले बिंगमा एक सानो फाइदा छ भन्छन् - तर यो मामूली छ। एक पृष्ठमा कुञ्जी शब्द घनत्व प्राप्त गर्न अर्को पनि हो जुन केही वर्ष पहिले सबै सुविधाहरू गुमाएको थियो, तर स्प्याम्मी ई-मेलहरूमा हामी सबै यी 'अन्तर्राष्ट्रिय' एसईओ कम्पनीहरूबाट पाउँछौं, तिनीहरू अझै यस बारेमा कुरा गर्छन्। तपाईको पृष्ठलाई कुञ्जी शब्दहरूले भरिएको छ, र तपाईले राम्रो भन्दा बढि नोक्सान गर्नुहुनेछ। एंडी पेयजल, आईक्यू एसईओ
त्यो तपाईंले गर्नु हुँदैन ट्र्याक श्रेणीकरण किनभने ती दिनहरू धेरै निजीकृत छन् र यति विश्वास गर्न हुँदैन। महान एसईओ को एक जोडी को बारे मा लेखिएको छ "प्रदान छैन" किन तपाईं तिनीहरूलाई ट्रयाक गर्नुपर्छ मा सुरू गरिएको छ: समग्र तिनीहरूले तपाईं कसरी खोज ईन्जिन मा गरिरहनुभएको मा एक महान सिंहावलोकन दिन्छ। म उनीहरूसँग पूर्ण रूपमा सहमत छु, यसले तपाईंलाई बजारमा तपाईंको हालको स्थितिमा ठूलो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ र सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूमा मूल्यवान डाटा पनि प्रदान गर्दछ किनकि हामी यसलाई हाम्रो खोजशब्द अनुसन्धानका प्रयासहरूको साथ मिलाउँदछौं। मार्टिजन स्किजेबेलर, नेक्स्ट वेब
त्यो SEO सबै तपाइँलाई चाहिन्छ। त्यहाँ एउटा साझा धारणा छ कि तपाईं एक राम्रो एसईओ कम्पनी राख्नुहुन्छ र तिनीहरूले तपाईंलाई महिनौं भित्र लाखौं डलर बनाउन मद्दत गर्दछन् र यो वास्तवमै हाम्रो उद्योगको सबैभन्दा मिथक हो। म विश्वास गर्दछ कि व्यापारको विकास केहि विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ जसमा सेवा वा उत्पादनको गुण, ब्रान्ड मान, बजार परिवर्तन, मार्केटि customer, ग्राहक सेवाहरू र अधिक समावेश छन्। SEO मार्केटिंगको एक भाग मात्र हो। मूसा हेमानी, सेटलक्स
केहि चीजहरू जुन मँ सधै SEO लाई नयाँ भन्न को लागी सबै hype लाई विश्वास नगर्नु हो। त्यो गुगलको शब्दलाई सुसमाचारको रूपमा लिदैन र तपाइँले पढ्ने प्रत्येक SEO ब्लग पोष्टलाई विश्वास गर्दैन। सत्य यो हो कि एसईओ ब्लग पोष्ट बहुमत निरपेक्ष बल्कहरू हुन्। धेरै सिद्धान्त हुन्, धेरै फिक्शन हुन् - धेरै एसईओ ब्ल्गरहरू कहिले शट अप गर्ने भनेर जान्दैनन् र उनीहरूमध्ये धेरैले नम्रता थाहा पाउँदैनन् यदि यो माथि हाम फाल्यो र अनुहारमा हिर्कायो भने (तपाईं आफैले आफ्नै दिमाग बनाउन सक्नुहुन्छ)। तपाईं यो देख्न सक्नुहुन्छ कि विडंबना, वा मेटा रूपमा) मा।
उद्योगमा मानिसहरुका लागि, मेरो लागी लेखक रैank्क एक मिथ्या हो, कम्तिमा त्यस तरीकाले कि धेरै SEO ब्लगर्सले यसलाई काम गर्न विश्वास गर्दछ। मेरो सल्लाह त्यहाँ सबै हल्ला हल्लाबाट जोगिन र यसमा बिल स्लेस्की र मार्क ट्राफगेनले मनपराउने कुरा के पढ्न जान्छ - कम्तिमा पनि तपाईले सही ज्ञान पाउनुहुनेछ र जंगली निष्कर्षमा होइन। टम रोबर्ट्स
त्यो बहुसंख्यक मानिस जसले उनीहरू वा उनीहरूको कम्पनी हो भन्छन् पेशेवर SEO कम्पनी वास्तवमा हो। एसईओ ज्ञान दाबी गर्ने फर्महरूको विशाल बहुमत, SEO मा १० वा ११% समझ छ। रोबर्ट फिशर, ड्रमबिएट मार्केटिंग
सब भन्दा ठूलो एसईओ मिथ्या हुन सक्छ ती मानिसहरु जसले $ 1 मिलियन तिर्ने सोच्दछन् पीपीसीले वास्तवमा मद्दत गर्दछ तपाईंको SEO अभियान। जेम्स नोर्क्वे, समृद्धि मिडिया
हालको सबैभन्दा ठूलो एसईओ मिथक त्यो हो SEO जिउँदो छ र बलियो हुँदै गइरहेको छ। वास्तविकतामा, SEO भन्दा प्रभावकारी हुन अझ धेरै गाह्रो छ पहिले जस्तो। हरेक दिन, एसईओ एक कम शक्तिशाली जैविक मार्केटिंग च्यानल बनिरहेको छ। ड्यानी डोवर, Lifelisted.com
त्यो यदि तपाइँ PR वा सामग्री मार्केटिंग गर्नुहुन्छ र उच्च मूल्य लि ranking्क रैंकिंग प्राप्त गर्नुहुन्छ भने एन्कर पाठ लिंक बिना नै आउँदछ। यो एसईओ पजलको केवल एक टुक्रा हो। डेभिड कोनिगसबर्ग, अधिकतम लक्ष्यीकरण
माथिका उत्तरहरू स्पष्टता र संक्षिप्तताको लागि थोरै सम्पादन गरिएको छ।
टैग: ऐडवर्ड्स खर्चएंडी पेयजललेखकत्वकालो टोपीकालो टोपी एसईओसामग्री मार्केटिङविवादास्पद SEOकुरागामीड्यानी डोवरडेभिड कोनिगसबर्गडिजाइननिर्देशिकाहरूड्रप डोमेनहरूड्रमबिट मार्केटिंगसहि मेल खाताभाँडालाई खुवाऊराम्रो सामग्रीअतिथि ब्लगिङआईनेट एसईओआईक्यू एसईओजेम्स नोर्क्वेजीवनजीवनLifelisted.comलिंक निर्माणmoznofollowनफोलो लिंकहरूइष्टतम लक्ष्यीकरणपृष्ठ श्रेणी sculptingपैट्रिक सेक्स्टनफिल बकलेपीपीसीव्यावसायिक एसईओसमृद्धि मिडियारान्ड फिशकिनरोबर्ट फिशरएसईओ जीवित छSEO मरेको छएसईओ मिथकएसईओ मिथकSEO रणनीतिSEO बनाम डिजाइनसाइमन पेनसनटम रोबर्ट्सअनुपम सामग्रीबेकार एसईओZazzle
Kieran Wilson Wednesday, August 13, 2014 Friday, August 26, 2016
Kieran विल्सन को लागी डिजिटल मार्केटिंग प्रबन्धक हो स्वचालित अंतर्दृष्टि, जसले भर्खरै मार्केटिंगका लागि वर्डस्मिथ शुरू गर्‍यो, यो अनुप्रयोग जसले डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीहरूको लागि ग्राहक रिपोर्टि autoलाई स्वचालित बनाउँदछ। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति, इनबाउन्ड मार्केटिंग, र मापन र एनालिटिक्समा विशेषज्ञता; कीरन प्रायः यी विषयहरूको बारेमा बोल्छ र लेख्दछ। उनले ग्राउन्ड अपबाट तीन बिभिन्न मार्केटिंग विभागहरू निर्माण र स्केल गरिसकेकी छ, एउटा ओम्निकम सहायक कम्पनीका लागि र एक अग्रणी सोशल मिडिया मार्केटिंग एजेन्सीको लागि।
२०१ Marketing मा सामग्री मार्केटिंग अडॉप्शन, रणनीति र परिणामहरू
न्यूजजेकिking खराब रणनीति हैन - जबसम्म डिस्ट्यास्टेबल हुँदैन
अगस्ट 15, 2014 मा 9: 40 AM
महान पोष्ट Kieran! यहाँ धेरै उपयोगी जानकारी साझा गरिएको को साझा को लागी धन्यवाद ..